⁭မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ခညောင်း သော ကိုတုတ်ကြီး: January 2009
ထမီအုပ်၍ လွှတ်လိုက်သည် (တကိုယ်တော် ပြောဇာတ် နားဆင်နိုင်သည်)
hta main oat yway ...
အချိန်ကား ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ နှောင်းပိုင်း ဖြစ်၏။ ကျွန်ုပ် တုတ်ကြီး သည် ဆန့် ငင်ဆန့် ငင်ဖြင့် ဖိနပ်မပါသော ခြေဖ၀ါးနှစ်ဖက်ကို ဖော့ကာ ဖော့ကာ ဒပ်ဘလင်မြို့ဆင်ခြေဖုံးတနေရာ မှ ရိုးရာအရက်ဆိုင်တခုရှေ့အရောက် ဖောက်သည် ရလိုရငြား ကျွန်ုပ်၏
လမ်းလျှောက် တုတ်ကလေးကို ရမ်းရင်း စမ်းတ၀ါးဝါးဖြင့်
နာမည်ကြီး ဂျပန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းထဲမှ မျက်မမြင် အနှိပ်သည် ဇာ တို အိချိ စတိုင်ဖြင့် တလှမ်းခြင်း လှမ်းဝင်လိုက်၏။
ထိုအချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ အူလှိုက်သည်းလှိုက်ရယ်သံကိုကြားလိုက်ရသည်မှာ..... "ဟဲဟဲဟဲဟဲ ဘယ်ရမလဲကွာ ငါတို့ ကအစကတည်းက ကြိုပြီးတော့ကြံထားတာ သိတယ်မဟုတ်လား မဲဆောက်က ကောင်တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ ပြောထားပြီးသား မင်းတို့ ဝန်ကြီးဖြစ်ချင်သလား
မင်းတို့ ဝန်ကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ credential challenge ကိုလုံးဝ ကန့်ကွက်ရမယ် ဒါပဲ "
ဟူသော စကား ဆုံးသည်နှင့် နေ့ မစေ့လမစေ့ ဥမှ ကွဲလာသော လိပ်ကို အခွံချွတ်ကာ ကတ္တရာစေးအိုးထဲ ဆောင့်ကန်ချထားသည်နှင့်တူသည့်
ရုပ်ဖြင့် ထိုသူက ခါးကြားမှ ဆောင်ဓါးကို အကြောင်းမရှိပဲ ဆွဲဆွဲ ထုတ်နေခိုက် ခပ်ညံ့ညံ့ ယာကူဇာ ဂိုဏ်းခွဲခေါင်းဆောင် နှင့်တူသည့် မျက်မှန် တပ်ထားသော လူက " ဒါက ဖြစ်သင့်တယ်လေနော် ... I think that's what I think and that I 'll think ” ဟု ရေချိုးရန် အမြဲ
၀န်လေးတတ်သူ လူညစ်ပတ်လူပျင်းတယောက်၏ ဟန်ဖြင့် အသားလွတ် ၀င်ထောက်ခံပြန်၏။
ထိုအချိန်တွင် ခေါင်ရေဗူးကို လည်ပင်းတွင် ဆွဲလျှက် ငရုတ်သီး တောင့်ဖြင့် သွားကြားထိုးနေသော မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ခေတ် မြို့နယ်အတွင်းရေးမှူးတဖြစ်လဲ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်ကြီး ခွန်နွားကိုကြံ က ဒါဝင်၏ သီအိုရီ မှန်ကန်ကြောင်း သူ၏ ကုန်းကွကွ
ပေကလပ်ပေကလပ် ဟန်ဖြင့် “ဒါကျုပ်တို့ ကလုပ်ဖို့ ရှိတယ်လေ လုပ်ဖို့ ရှိလို့ ကျုပ်တို့ လုပ်တာဖြစ်တယ်လေ ကျုပ်တို့ လုပ်တာဖြစ်ပြီးကျုပ်တို့ လုပ်တာပေါ့ ကျုပ်တို့ လုပ်တာကိုသူများဝင်လုပ်တယ်ဆိုရင် ကျုပ်တို့ လုပ်တာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်သွားမှာပေါ့
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်ဖို့ ကို တော့ကျုပ်တို့ လုပ်မှ လုပ်တာဖြစ်မှာပဲ လုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လေ ” ဟု ဘာကိုလုပ်မှန်းမသိသော လုပ် စီး ပေါ်လစီဖြင့် စီးစီးပိုင်ပိုင်လေးလေးနက်နက်ဆွေးနွေးလိုက်ပြန်၏။
အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားခိုက် မဲဆောက်နယ်မှ လာသော ပုဂ္ဂိုလ် တစ်ယောက်က အသားလွတ်ခြောက်ကပ်ကပ်ရယ်ကာ ယာကူဇာ ဂိုဏ်းခွဲခေါင်းဆောင်နှင့်တူသော လူ၏ အင်္ကျီခေါက်ရိုးကြားမှ ဂျီးတို့ ကို လျှာဖြင့်ကုန်းလျက်ကာ သန့် စင်ပေးပြီးနောက် ပြောလိုက်၏။
ဒီ... ဒီ လို ရှိတယ်ဗျ.... ခရက်ဒန်ရှယ် ချဲလင်းကို ကျနော့်တို့ မူအရ... ဟိုမှာ ခင်ဗျားတို့ 
သိတဲ့အတိုင်းပဲလေမဲဆောက်ဆိုတာ မူအရမထောက်ခံရင်လည်း အနေရအထိုင်ရကျပ်တယ်ဗျ သိတယ်မဟုတ်လား...အဲဒီတုန်းကကျနော်ဝန်ကြီးဖြစ်မယ်မှန်းမသိဘူးလေ ... မဟုတ်ဘူး
နေရာလိုချင်လို့ မဟုတ်ဘူးနော် ကျနော်တို့ က တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်လာတာလေ ...ဟုတ်ဘူးလား ... အတိအကျပြောတာနော် နေရာလိုချင်လို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေ.. အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ မလုပ်ဖူး လို့့ပြောပြန်လဲမဖြစ်ဘူး မဖြစ်ဘူးဟူးဟူး. ဒီတော့ မူအရပေါ်လစီအရ ဟိုလိုလို
ဒီလိုလို အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ဗျာ အကိုကြီးရာ Goat's Balls policy ပေါ့ဗျာ Goat's Balls policy ပေါ့ သိတယ်မဟုတ်လား... ခု ကျနော်တို့ အစိုးရသွားမယ့် ပေါ်လစီအတိုင်းပါပဲ ဟို နေရာလိုချင်လို့ မဟုတ်ဘူးနော်... နေရာလိုချင်တယ်ဆိုတာ အိပ်မက်ထဲတောင် ထည့်မက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော် တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက်နော်
အကိုကြီးတို့ လိုပဲနော်.... ဟု ပြောလိုက်၏။
အရက် တအိုး အကုန်ခန့်တွင် ရေချိန်ကိုက်နေသော ထို လူစုသည် ဆိုင်ထဲ မှ လေးလံ သောခြေလှမ်းများဖြင့် သိုင်းကွက်နင်းကာ ထွက်သွားတော့၏။
ကျွန်ုပ်တုတ်ကြီးလည်း ဖောက်သည်မရသည့်အဆုံး မထူးတော့ပါဘူး ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ စိတ်ဝင်စားသည့်အလျှောက် ထိုသူ တစု အရက်ဆိုင်မှ ထွက်သွားရာနောက်သို့တိတ်တဆိတ်လိုက်လံကြည့်ရှုရန် ခေတ်ပြိုင် လမ်းမကြီး ပေါ်သို့ တက်လာလိုက်တော့၏။
ထိုလူစုသည် ဇရပ်နှင့်တူသော အဆောက်အဦ တခုထဲသို့ ဝင်သွားသည်ကိုတွေ့ ရပြီး ကျွန်ုပ်ကလည်း ဇရပ် ဘေး နံရံနားကပ်ကာ ချောင်းနားထောင်နေမိ၏။ သူတို့ ပြောနေသောစကားများအားမကြားတချက်ကြားတချက်.....
ထို့ နောက် ” မီးဒို့ကောင်တွေ ဇာပဲ ပရော ပရော ငဒို့ ကဒေါ့ ထိုင်မကြေ့ နိုင်ဘူး လုပ် စရာ ရှေ့ ဆက်လုပ် မှာဘဲ ကြာ သ ကွာ” ဟူသော အော်ကျယ်ဟစ်ကျယ် အသံနှင့် အုန်းဒိုင်းဖုန်းခွပ် အွတ် ဗြွတ် စွတ် ဘွတ် ဟူသော အသံတို့ ကိုဆက်တိုက်ကြားလိုက်ရတော့၏။
နှင်းမြူတို့ သည် ဖြူဖွေးဝေ့၀ဲကာ တလိမ့်လိမ့်ကျဆင်းနေ၏။ ပတ်ဝင်းကျင်သည် အေးစက်ခြောက်ကပ်လျှက် .........ထိုအချိန်တွင် အဝေးကောင်းကင်မှ ငှက်တအုပ်သည် သုတ်သီးသုတ်ပြာ အရှေ့ ဖက်အရပ်သို့ပျံထွက်သွားကြသလို ခပ်ဝေးဝေးမှ တောခွေးအူသံသဲ့သဲ့ကိုလည်းကြားနေရ၏။ ကျွန်ုပ်သည် မြင်ရလိုမြင်ရငြား နံရံပျဉ်ပြား ကြား သံပေါက်မှချောင်းကြည့်လိုက်ရာအဖွားကြီးတဦးက တောင်ဝှေးကို ဘယ်ဘက်လက်ဖြင့် ကိုင်လျှက် လက်နက်ပုန်းများတပ်ဆင်ထားသည်နှင့်တူသော နံ့သာဖြူယပ်တောင်ကို ညာဘက်လက်မှ တဖြေးဖြေးချင်းခပ်ကာ
”ကျမတို့ က တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် အလုပ်လုပ်နေတာ လေ တိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးအတွက် အလုပ်မလုပ်ဖူး
လို့ ယူဆရတဲ့လူတွေကို ပြတ်ပြတ်သားသား ဆက်ဆံရမယ်...
စု ပြောထား တာတွေရှိတာပဲ ရှင်တို့ လဲ ဒါကိုသိနေတာပဲ credential challenge တုန်းကလဲ ရှင်တို့ ကပျက်ယပျက်လုပ်တယ် ဒီမယ် ရှင်တို့တွေ ဒီအသက်ဒီအရွယ်အထိ ရောက်နေပြီ ကလေး စိတ်နဲ့
သိပ်ကြောက်နေရင် ထမိန်ဝတ်ထားကြ ”
ဟု ပြောပြီးသကာလ ကိုယ်ဖော့သိုင်းပညာဖြင့် စွေ့ ကနဲတချက်ခုန်ကာ အူလှိုက်သည်းလှိုက်ရယ်မောပြီးနောက် နောက်ဂျွမ်းပစ်ကာ မည်သို့ လုပ်လိုက်သည်မသိ စောစောက အရက် ဆိုင်တွင် လေပေးနေခဲ့သော အုပ်စု တစုလုံးသည်သူမ၏ ဇောင်းပါတိတ် အောက်ပြားပြားမှောက်ကာ အကြောပိတ်ခံလိုက်ရပါလေတော့သတည်း။
တုတ်ကြီး တာ ၀တိံသာ
Posted by Nyein Zay Oo at 12:06 AM4comments
အတိုင်းသား ငေး ရမယ့် အိုဘယ့် ဗဂျိုင်းနားဒေး
ရာသီ ဥတု က မိုးပဲရွာတော့မလိုလို နေပဲပူတော့မလိုလို ဟိုလိုလို ဒီလိုလို နှင့် ....။
ကျွန်ုပ်သည် ရှမ်းဘောင်းဘီ ခါးကြားတွင် လိတ်ထည့်ထားသော ကွမ်း ယာ အထုတ်ကို ထုတ်ယူလိုက်ပြီး ဗမာဆေး နိုင်နိုင် ထုံးဖြူ အာမွှေး ကွမ်းတစ်ယာကို ပါးစောင်တွင်းသို့
ဖြေးဖြေး သာသာ သွင်းလိုက်ရင်း ငုံလိုက်၏။
ပြီးတော့ ရှမ်းဘောင်းဘီ ဘယ်ဘက် အစ ကို လိတ်တင်လိုက်ပြီး ဘေး ဘီကိုကြည့်လိုက်၏။
ခွေးတကောင်ကြောင်တမြီးမှ မရှိ အဆင်ပြေလိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း ..။
ခြံထောင့်သရက်ပင်ကြီးကို အားရှိပါးရှိ ချိန်ကာ ငယ်ငယ်ကအရံမီးသတ် တပ်ဖွဲ့တွင် ဗိုလ်ကြီး ဖြစ် ချင်သော စိတ်ကူးယဉ်မှု မကုန်သေးသည့်အလား မီးသတ်သမား ကဲ့သို့ အိုက်တင်အပြည့်ဖြင့် အမြှုပ်တစီစီကျင်ငယ်
တို့ ကိုပက်ဖျန်း စွန့် ထုတ်ပြီးနောက် ကျက်သီး တချက်နှစ်ချက်ထကာ ဘယ်ညာ ခါရမ်း ပြီး သကာလ လက်နှစ်ဖက်ဆန့် ၍ သမ်းမိပါတော့၏။
ထို့နောက် ရှမ်းဘောင်းဘီ အတို တဖက် အရှည် တဖက်ဖြင့် အိမ် ဘေးနံရံ နားက မိုးရေခံ သော အင်တုံ ဆီသို့ သွားလိုက်၏။ ပြီးတော့ အုန်းမှုတ်ရေခွက်ကို ရိုးတံမှကိုင်ကာ အသာလက်ဆေးလိုက်၏။
ထမင်းဟင်းချက်ရဦးမည် ။ ဒီနေ့ တော့ ထုံးစံအတိုင်း ပဲ ပုတ်ထောင်း၊ မုန်ညင်းဟင်းချို ၊ ၀က်သားဆီပြန် ချက်မည်ဟု တွေးထားသည့်အတိုင်း နေလှမ်းထားသော ပဲပုတ် ဗန်းကို ပါ တပါတည်း သယ်ရင်း အိမ်ပေါ်ပြန်တက်လာခဲ့၏။
မီးဖို အပြင် ဖက် ရေ ကပြင်တွင် မုန်ညင်း ပင်များအား ကျကျနန ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ကာ ဆေးနေခိုက် ဘေး အိမ်က မတင်လှ နှင့် ကိုထွားကြီးတို့သမီးများဖြစ်သော ရင်ရင်ထွား က သူ့ ညီမ တင်တင်ထွား နှင့် စွာကျယ် စွာကျယ် ငြင်းခုံသံတို့အား အတိုင်းသားကြား နေရ၏။
“ဟဲ့ မိတင် ရဲ့ ငါ့ကို ဖိတ်တာဟဲ့ ” ဟု ရင်ရင်ထွား က မျက်စချီကာ ခပ်မာမာပြော၏။
“ အို.. မဟုတ်ပါဘူး မမရင် ရယ် ကျမကိုလည်း ဖိတ်ပါတယ်” ဟု တင်တင်ထွား ကလည်းမနိုင်ရင် ငါ ပြန်ငြင်း၏။
“ဟယ် ဒီကောင်မလေးတွေ ငါကလည်း ဘိုစာ ပဲစာ မတတ် ၊ ဒီတော့ နင့်အဖေ ကိုကိုထွားပြန်လာမှ ဘယ်သူ့ ဖိတ်တယ်ဆိုတာ သေချာမေး ညည်းတို့ မလဲ ဘိုစာလေး တတ်တယ်ဆိုမှ အဲဒီ အင်တာနက်နဲ့ ကွန်ပြူတာ ကို ပဲ လု သုံးလိုသုံး ငြင်းလိုငြင်းနဲ့ ဘာကောင်မတွေလဲမသိဘူး ဣနြေ္ဒ ကိုမရှိပါဘူးတော်” ဟု မတင်လှ က အော်ပြန်၏။ သို့ သော် မတင်လှကို မတွေ့ ရ ၊ သူ့ မီးဖို ထဲ ကနေ လှမ်းအော်နေပုံရ၏။
ကျွန်ုပ်တုတ်ကြီး မနေနိုင်တော့ ။ အရပ်ထဲ ဆူညံဆူညံ ဆိုလျှင် မျက်နှာပိုးသေသေလေးဖြင့် အသာ ထိုင်ကြည့်ကာ ပိုင်ပဟေ့ ဆိုမှ ၀င်ဝင် ဆရာလုပ်တတ်သော ၀မ်းတွင်းပိုးက ထ ထိုးပါလေတော့၏။
ဆောင့်ကြောင့်ထိုင် ပြီး မုန်ညင်း ပင် လေးတွေ ဆေးကြောနေရာမှ အပြီးထတာလဲ မဟုတ် ထိုင်တာလဲမဟုတ် တ၀က်တပျက် ကုန်းကုန်းကွကွ ဖြင့် ဆေးပေါ့လိပ်တိုကို ခဲ ထားရင်း ကွမ်း ငုံထားသော ပါးစပ်ဖြင့် ဟိုဘက်အိမ်ကိုလှည့်ကာ လက်က မုန်ညင်းပင် တစု ကို ကိုင်ရင်း “ဟဲ့.. ဟိုဘက် အိမ်က ညီအမ... နင်တို့ တွေ ဘာတွေငြင်းနေကြတာတုန်းဟ...သေချာ ဘာသာမပြန်တတ်ရင် ပြောလေ နင်တို့ ကလည်း သိပ်ခက်တာပဲ ငါတယောက်လုံး အိမ်နားကပ်နေတာကိုများ ခက်ပါပေတယ် ” ဟု အော်ပြောလိုက်၏။
မနူးမနပ် အငယ် မ တင်တင်ထွားက “ ဟယ် အန်ကယ် တုတ်ကြီး ရှိတာပဲ ဒီလို အန်ကယ်ရေ
ဒီလို .. ထွား တို့ ကို အင်တာနက်က နေ အီးမေးတစ်စောင်ပို့ တယ်တော့်..အဲဒါကို ထွား မမ ..
မမရင် က အတင်းပဲ ငြင်းနေတယ် သူ့ ကိုပဲ ပို့ တာပါတဲ့ မီးကိုဖိတ်တာဟုတ်ဘူးတဲ့” ဟု နှုတ်ခမ်း ထူထူ လေးကိုစူကာ ကနွဲ့ ကလျ မခို့ တယို့ အသံပြဲ အသံပြာဖြင့် အော်ပါတော့၏။
ကျွန်ုပ်ကလည်း ဆရာလုပ်ရန်ဂွင်ဝင်ပြီဟူသောအသိဖြင့် ချက်ဖို့ ပြုတ်ဖို့ ဆေးနေသည့် မုန်ညင်း ပင်များ အား စဉ့်အင်တုံထဲ ပြန်ပစ်ထည့်ရင်း “ ဟဲ့ ဒါလေးများ ဒါဆို ပရင့်ထုတ်လာခဲ့ဟေ့ နင်တို့ နှစ်ယောက်လုံး ဟာတွေကို ငါ သေချာ ကြည့်ပေးမယ် ” ဟု ပြန်အော်လိုက်တော့ လင်လိုချင်နေသည်မှာ တပိုင်းသေယုံမက ကိုးမား ပါ ဖြစ်နေပုံရသော အကြီးမ ရင်ရင်ထွားက “ ဦးတုတ်နော် ဦးတုတ် စကားကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြော ဘာ နင်တို့ နှစ်ယောက်လုံး ဟာတွေကို ငါသေချာ ကြည့်ပေးမယ်လဲ ဟွန်း” ဟု ကြာသံ ခရာသံအပြည့်နှင့်
နွားပိန်မ ပေါက်ဆိန်ဖြင့် အထုခံရသလို လှမ်းအော်ပါတော့၏။
ကွန်ုပ်တုတ်ကြီးကလည်း ရှက် ချင်ယောင်ဆောင်ကာ “ ဟွန် ....... ကောင်မလေးနော်လူကြီးကို လျှောက်နောက်နေပြန်ပြီ ” ဟူသော အသံနှင့် တဖက်ကလည်း ညီမငေးရယ် အကိုကြီး ကိုကိုတုတ် က အဲသလို မရည်ရွယ်ပေမယ့် ညီမငေး က ဂလို ဘာသာပြန်ပြီး ညုတုတုတွေလုပ်နေမှတော့ ဟူသော အတွေးနှင့် မိန့် မိန့် ကြီး ငေးနေလိုက်၏။
တင်တင်ထွားနှင့် ရင်ရင်ထွားသည် သူတို့ အိမ်တွင်းပြန်ဝင်သွားပြီးများမကြာမှီပင် တယောက်စာရွက်တရွက်ကိုင်ကာ နိမ့် တုံမြင့်တုံ ရင်အစုံဖြင့် ကျွန်ုပ်မစ္စတာ တုတ်ကြီး၏ မြင်ကွင်းသို့ တလှမ်းချင်းဝင်ရောက်လာကာ နောက်ဖေးလှေကားမှ တက်လာပါတော့၏။
အငယ်မ တင်တင်ထွားက စာရွက်ကို ကျွန်ုပ်လက်ထဲသို့ ထည့်ပေးလိုက်၏။ အကြီး မ ရင်ရင်ထွားက ကျွန်ုပ်၏ ဘယ်ဘက်ဘေး ပုခုန်းနားမှ သူ မ ၏ ရင်သားနှင့် ကျွန်ုပ်၏ လက်မောင်း ထိလုမတတ် ကပ်ကာ စာရွက်ကို ဘေးမှ ကြည့်နေ၏။ အို.... ရင်ဖိုရပါလား လကွယ် ခွိခွိခွိ ဟု စိတ်ထဲတွင်တွေးမိပါရင်း စာကို လေယူလေသိမ်း ဘုန်းကြီးကျောင်း ထွက်၏
ငပိ အက်ဆန့် ဖြင့် ဆပ် ဘဂျက် ကိုလုံ ဗဂျိုင်းနား ဒေး ဟေးဟေး ဟေး..........မှ အစချည်ကာ အောက်ပါအတိုင်း ခပ်တည်တည်ဖတ်လိုက်ပါတော့၏ ။
Subject:Vagina Day (V-Day) Supporters
Date:Tue, 20 Jan 2009 11:39:56 +0700
Thank you for taking an interest in our campaign to end violence
against women and girls. Tickets for our show are now on sale!! Our
poster is also attached.
Dates: Fri 27 February, Sat 28 February, Sun 1 March
Where: Patravadi Theater, Theater in the Garden (main stage)
Book before Feb 1 and get special prices!
Standard Ticket, 350B
Premium Ticket, 550B
VIP Ticket (includes dinner at the Theater before the show): 700B
We also have group discounts and student discounts (50%).
You can purchase tickets through Total Reservation by:
2. Call their call center, 02 833 5555
2. Go to one of their ticket offices in Paragon, Emporium, Mo Chit and
Victory Monument BTS stations, and other locations
All proceeds will go to Emergency Home,asafe house for women and
girls who have been raped or victims of violence. Our money will go
to the operations of their safe house and to initiateanew violence
Book now to reserve your seat to Bangkok's first V-Day production!
We'd also appreciate it if you could pass this information on to your
friends and family who may be interested.
The V-Day Bangkok Team
+ 66 87 5717 966
စာ အပြည့်အစုံကိုဖတ်ပြီးသကာ လ ကျွန်ုပ် မှာ ရင်တုန်ပန်းတုန်ဖြင့် ( စကား မစပ် ....ရင်တုန်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ ၊ ဘယ်က ပန်းကတုန်တာလဲ မသိ) ရင်ရင်ထွား ၏ မျက်နှာလေး သည် နီရဲ ရှက်သွေးဖြန်းလျှက် ၊ တင်တင်ထွားကတော့ အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ
“ အန်ကယ် တုတ်ကြီး အန်ကယ် တုတ်ကြီး ဗဂျိုင်းနား ဒေးဆိုတာ ဘာလဲ ဟင်” ဟု မေးပါတော့၏။
ကောင်းကင်ကိုကြည့်လိုက်တော့ အုံ့ မှိုင်းမှောင်ရီကာ တိမ်မဲ ညိုတို့အနောက်ဖက်သို့လေပြေနှင့်အတူ တငြိမ့်ငြိမ့် တလိမ့်လိမ့်ပြေးလွှားနေ၏။ ခြံစောင်ရင်း မန်ကျည်းပင်မှ မန်ကျည်းရွက်ငယ်တို့ တဖွဲဖွဲ တဖြေးဖြေး လေအဝှေ့ နှင့် တစိမ့်စိမ့်ကြွေ နေကြ၏။
ရင်ရင်ထွား၏ကိုယ်သင်းနံ့ကလေးသည် ပိုမိုသင်းပျံ့ လာသည်ထင်ရသလို သူမ၏ ရွှေ ရင်အစုံသည်လည်း လပြည့်ည ဒီ ရေလှိုင်းတို့ လို မို့ မောက် လှုပ်ရှား နိ မ့်မြင့်ဖြင့် ...။
“အိုဘယ့် ဖြားသခင် ....ဘဇာကြောင့် ကျွန်ုပ် တုတ်ကြီးအား ယခုကဲ့သို့ ကျဉ်းထဲ ကျပ်ထဲ အတင်း ၀င်ခိုင်းချင်ပါသနည်း” ဟု သော အာမေဋိတ်ကစိတ်အာရုံတွင် ပဲ့တင်ထပ်နေ၏။
တကယ်တန်းတော့ တုတ်ကြီးတို့ က ဘယ်လောက်ကျပ်ကျပ် ဘယ်လောက်ကျဉ်းကျဉ်း အရည်အချင်းအပြည့်ဖြင့် အချိန် ယူ ကာ ညင်ညင်သာသာ ၀င်နိုင်ထွက်နိုင် ကိုင်နိုင်တွယ်နိုင်သော အရည်အချင်း ရှိသည်ကို ဖြားသခင် သိသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ စစ်ဆေးတော်မူလေသလော ။
“ဦးတုတ်....ဆို မေးနေတယ်လေ ဖြေလဲ အဖြေဘူး ” ဟု ရင်ရင်ထွား က နှုတ်ခမ်းထူထူကလေးကို စူကာ ဗေလုဝနှင့်နင်လားငါလား ထွားကြိုင်း သန်မာသော ကျွန်ုပ်၏ လက်မောင်းအိုး ကြီးများအား ခပ်ဆဆ လေး ဆွဲရင်း မေးပါတော့၏။
“ဟေ... ရင်ရင်ရဲ့ မင်း ဘာမေးနေသတုန်းကွယ့် ” ဟု ပြန်မေးတော့
“ကြည့်ပါလား သူများမေးနေတာဆို ဘာမေးလို့ မေးမှန်းကိုမသိဘူး ဘာတွေကိုအာရုံရောက်နေမှန်းမှမသိတာ ဦးတုတ် နော် ဦးတုတ် ”ဟု သူမ လေး က ညုလိုက်ပြန်၏။
“ ဟုတ်ပါဘူး ကွယ် သူတို့ စာအရ Tickets for our show are now on sale!! ဆိုလို့ပါ ရင်ရင်ရယ် အဲသလို ဆိုလို့ ပါ ” ဟု ကြေကြေကွဲကွဲ ကြီးဖြေချလိုက်၏။
“ ဟယ် အန်ကယ်တုတ်ကြီး ကြည့်ရတာ ဒီဖိတ်စာဖတ်ပြီးမှ ၀မ်းနည်းနေသလိုကြီးပဲ မမရင် ” ဟု အငယ်မ တင်တင်ထွား က မှတ်ချက်ချ၏။
ဗဂျိုင်းနား ဒေးမှာ ပြမယ့် ရှိုး ကို ဘယ်သူ စိတ်မ၀င်စားပဲ နေနိုင်မှာလဲ ကလေးတို့ ရယ် ဟု သာ အော်မေးပစ်လိုက်ချင်၏။ ဒီ တင်တင်ထွားလဲ တော်တော်အလိုက်ကန်းဆိုးမသိလေခြင်း ကွယ် ..........။
“ ဦးတုတ် ဦးတုတ် .... First V-day Production ဆိုတာဘာလဲမသိဘူးနော် ဘာတွေ ထုတ်မှာလဲမသိဘူးနော်” ဟု ရင်ရင်ထွား က ဖီလင်သံလေးဖြင့် အားတက်သရောမေးပြန်၏။
“အော်ရင်ရင် ရယ်... သူတို့ Show ကို production လို့ သုံးသွားတာဖြစ်မှာပေါ့ကွယ် ” ဟု ဖြေရင်း မယုံမရဲဖြင့် ငါရွှီးတာမှားကြောင်း ယခု လို....
“မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန်ဖြင့် မြန်မာ အမျိုးသမီးတို့ ဖိနှိပ်ခံရမှု မှ လွတ်မြောက်ရေးရှေှး ရှုကာ
မိမိကိုယ် မိမိအားကိုးရေးစိတ်ဓါတ် စိုက်ထူမှုအရ မိမိတို့ အဖွဲ့ အစည်း၏ မူပေါ်လစီနှင့်အညီ
စမ်းသပ် အောင်မြင် အတည်ပြု ထုတ်လုပ်ထားသော Industrial strength ပုရိဿဖွားဖက်တော် အတု များအားလည်း ရောင်းချပေးသွားရင်းတပြိုင်နက်ထဲ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာ ပြသနာ အား တချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြတ်ဖြေရှင်း ပေးသွား ပြီး ခရမ်းသီး သခွားသီး မျိုးတုန်းမှု ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပြီးသားဖြစ် မည်ဖြစ်ကြောင်း” ဟု သာ ထို ဗဂျိုင်းနားဒေး ပြပွဲတွင် ဗဂျိုင်းနား စင်မြင့်ပေါ်မှ ဗဂျိုင်းနား ပြသမှု ညချမ်းတွင် ကြေငြာလိုက်ပါက .... တုတ်ကြီးကိုယ်ကျိုးနည်းပါပေါ့။
သို့ တည်းမဟုတ်လည်း နအဖ စစ်တပ်၏ မုဒိန်းကျင့်မှုများမှ အပြစ်မဲ့တိုင်းရင်းသား အမျိုးသမီးငယ်များ လွတ်မြောက်ကင်းဝေး စေရန် နအဖ စစ်တပ် တစ်ခုလုံးအားဣထိယ ယောနိ အတုများ military issue အဖြစ် ထုတ်ဝေ ပေးနိုင်ရန် စတင် ရံပုံငွေရှာသော ကိုယ်ထူ ကိုယ်ထ ဆောင်ရွက်ချက်တခုဖြစ်ချင်လည်းဖြစ်နိုင်သေးသပေါ့ ဟု ဟိုဒီတွေးတောရင်း အနှီဗဂျိုင်းနားပြပွဲကြီးကျင်းပရာ ဘန်ကောက်ရွှေမြို့ တော်နှင့် အင်မတန်ဝေးကွာနေသော တုတ်ကြီးဘ၀ ကို ၀မ်းအနည်းကြီးနည်းမိရင်း ရင်ရင်ထွားနှင့် တင်တင်ထွားတို့ ညီအမ သူတို့ အိမ်ဘက် ပြန်လှည့်သွားသည့် လှပ ကျော့ရှင်းသော နောက်ကျောပြင်ကိုသာ ငေးရင်း ကျွန်ုပ်တုတ်ကြီးတယောက် ဘန်ကောက်သို့ ခရီးတထောက်ထွက်ရန် အားခဲမိပါတော့၏။
အဲ့.......ဟယ်..... over-used vagina ကြီးတွေ များ ပြပွဲ တင်ပြရင် ငါ့ ခရီးစားရိတ်ဆုံး တာပင် အဖတ် တင်ဦးမည် မဟုတ်လော ဟု ပြန်တွေးမိပြီးသကာလ စဉ့်အင်တုံထဲ မှ မုန်ညင်း ပင်လေးများအား ဆယ်ယူကာ မီးဖို ခန်းတံခါးဖွင့်လျှက် စတင်ချက်ပြုတ်ရန် ခပ်ကွင်းပြင်လိုက်မိပါတော့၏။
Posted by Nyein Zay Oo at 5:04 PM2comments
ဂျီမပါ အသာလှုပ်ပါတဲ့ ထိုကာတစ် ရယ် အိုဘယ့်နွားနှစ်
လောင်စိန် တုတ်ကြီးတို့ လူမျိုးတွေအတွက်ကတော့ ယခုနှစ်သည် ထူးခြားသည့်နှစ်ဖြစ်ပေသည်။ ထုံးစံအတိုင်း အစီခံမပါသည့် ပြည်ကြီး ထုတ် စီးကရက်ကလေးတစ်လိပ်ကို ဘူးထဲကထုတ်ကာဆင်စွယ်စွပ်တံတွင်စွပ်လျှက် ရွှေသွား သုံးချောင်းပြူးပြဲနေအောင် ပေါ်နေသော နှုတ်ခမ်းထော်ထော် ပါးစပ်ပေါက်ထဲသို့ ထိုးသွင်းရင်း ပေသီးကို ဘယ်လက်နှင့် ခေါက်နေ၏။ မျက်မှန်အ၀ိုင်းကလေး
အပေါ်မှ ကျော်ကာ တလှမ်းချင်းလျှောက်လာနေသော ဆင်မယဉ်သာ ခြေလှမ်းဖြင့် အကြွေးယူနေကျ တလမ်းကျော်က မသိန်းစိန်၏ သမီး လေးကို မမှိတ်မသုန်လှမ်းကြည့်ရင်း စီးကရက်ကို အငမ်းမရဖွာလိုက်မိတော့ လောင်စိန်တုတ်ကြီး မီးခိုးသီးကာ အဟွတ်အဟွတ်ဖြင့် ဘောင်းဘီထဲ သေးထွက်သွားသည်ပင် ထင်ရပေတော့၏။
လောင်စိန်တုတ်ကြီးက လူကသာ တရုတ် အသားအရေက ဒီဇင်ဘာ လ ဆောင်းတွင်းမနက်တွေမှာ အငွေ့ တထောင်းထောင်းထနေလေ့ရှိသော ကောက်ညှင်းငချိပ်နှင့် က တဆင်တည်း။
ဒီတော့... လောင်စိန်တုတ်ကြီးကို အရပ်က ကွယ်ရာတွင် တရုတ် ငချိတ်ဟုခေါ်၏။ လမ်းထိပ်က ဆိုက်ကားသမားတွေက တရုတ်ချစ်တီးဟုခေါ်၏။ ရှိပစေတော့ မည်သို့ပင် ခေါ်ကြခေါ်ကြ လောင်စိန်တုတ်ကြီးက ဒီရပ်ကွက် ဒီမြို့ မှာ အကောင်။ အသပြာလေးကရှိ ။ အပေါင်းအသင်းက ပေါင်းတတ် ။ လာဘ်ကလေးကမြင် ။ မြန်မာလို ပီပီသသ ပြောနိုင်ပြီး မြန်မာတို့၏
အထာကိုနပ်၏။ ဒီတော့ လောင်စိန်တုတ်ကြီးတို့ လူတောတိုး၏။
ရပ်ကွက်ထဲ သာရေးနာရေးရှိလျှင်လည်း လောင်စိန်တုတ်ကြီးတို့က မသိချင်ယောင်မဆောင်။ တာဝန်သိ အိမ်နီးချင်း စိတ်အပြည့်ဖြင့် ရောက်နေကြ။ မသာဆိုလျှင် ကွာစိ ရောင်းရ၏။ညပိုင်းကာလသားများနှင့် တရုန်းရုန်း ဖဲဝိုင်းမှာ ချွေးပြန်ရ၏။ မင်္ဂလာဆောင်ဆိုလျှင်လည်း အနည်းဆုံး ရေခဲမုန့် သွားစားလို့ ဖြစ်၏။ ကိုယ်ဘယ်တော့မှ ပိုးလို့ မရနိုင်တော့သော သတို့ သမီးကို
ကြေကြေကွဲကွဲကြည့်ကာ လက်ဖွဲ့စားပွဲ ကို ကွေ့ ရှောင်ရင်း ပြန်လာလို့ ဖြစ်၏။
တနေ့ သား မတော့ လောင်စိန်တုတ်ကြီးတို့ လမ်းထိပ်က အင်တာနက် ဆိုင်တွင် အမြဲတန်း နိုင်ငံခြား က ရည်းစားနှင့် စကားပြောလျှင် “ကိုကို... ကိုကို ... “ ဟု ဘေးဘီကို ဝေ့၀ဲကြည့်ကာအော်တတ်သော မလှမြိုင်၏ သမီး အာကျယ်မ တယောက် လောင်စိန်တုတ်ကြီး၏ ဆိုင်သို့ရောက်လာကာ ဈေးဝယ်၏။
“ ဦးတုတ်ကြီး ...အောင်မယ် သတင်းစာကို ဖတ်နေလိုက်တာတော် ဘာများထူးမှာမို့လဲ”
လောင်စိန်တုတ်ကြီးက ဘူးသီး လက်သည်းနှင့်ဆိတ် ထားသည်နှင့် တူသော သူ၏ မျက်လုံးများကို ထပ်မံမှေးစင်းကာ ပေစောင်းစောင်းကြည့်ရင်း စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဟန်ဖြင့်“ဟဲ့ကောင်မလေး လူဆိုတာ ခေတ်နဲ့အဆက်မပြတ်မှ .....နင်နားလည်လား ဒါမှ သူများနိုင်ငံတွေ ဘာတွေလုပ်လို့ဒို့ နိုင်ငံဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိရမှာ“
“ဟားဟားဟား..ဦးတုတ်ကြီးရယ် သတင်းစာဖတ်တော့ ဦးတုတ်ကြီး နေ့ တိုင်းအလိမ်ခံရတာအဖတ်တင်မှာပေါ့ တကယ်သတင်းတွေသိချင်ရင် အင်တာနက် သာ အိမ်မှာတပ်လိုက် တကမ္ဘာလုံးက သတင်းတွေအကုန်သိ ရမယ် ” ဟု ပြောရင်း ယိုးဒယားမှလာသော ပုဇွန်မုန့် အထုတ် လေးထုတ်ကို ယူ ပြီး ပိုက်ဆံပေးချေရင်း အင်တာနက်ဆိုင်သို့ ပြန်သွားတော့၏။ ထပ်မံ၍ အရပ်စိတ်ပျက်အောင် “ကိုကို.... ကိုကို... “ ဟု အသံပြဲဖြင့် အော်ဦးမည်ဖြစ်ပေတော့၏။
သို့ ဖြင့် အာကျယ်မ၏ စကား နားဝင်သွားသော လောင်စိန်တုတ်ကြီးသည် ရန်ကုန်ရွှေမြို့ တော် တက်ကွန်ပြူတာစက်တစ်လုံးဝယ် ဘာညာဘာညာတွေနှင့်အလုပ်ဖြစ်အောင်စီမံရင်း
စိတ်ပြန်လည်ပေါ်ပေါက်လာရပေတော့သတည်း။ထို့ နောက် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကျွန်ုပ်လောင်စိန်တုတ်ကြီး၏ အိမ်ဆိုင်ကလေးပြုတ်သွားပြီးအပြင်ထွက်ကာအလုပ်လုပ်ရသော
ကျွန်ုပ်သည် တနေ့ တာ ပင်ပန်းကြီးစွာ ထမင်းတလုတ်အတွက်ရုန်းကန် လှုပ်ရှား ပြီး ငွေစကြေးစ ကလေးများရှာဖွေရ၏။
သားကျွေးမှုမယားကျွေးမှု မရှိသော်လည်း ကျွန်ုပ်၏ ခန္တာကိုယ် အတ္တဘောကြီး ဆက်လက်တည်တန့် ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက် စား ၀တ် နေ ရေး သုံးပါး ကိစ္စကိုဖြေရှင်းရန် အလုပ်လုပ်ရ၏။
ယခုညနေလည်းထုံးစံအတိုင်း အလုပ်မှနောက်ကျပြီး ပြန်ရောက်လာ၏။ အခန်းမီးကလေးကိုဖွင့်ပြီး လွယ်အိတ်ကလေးကို စာအုပ်စင်အပုလေးပေါ်တင်လိုက်ပြီးမီးဖိုမီးကိုဖွင့်ပြန်၏။ ထို့ နောက် အာလူး နှင့် မုန်ညှင်းဟင်းချို ကလေးကို နွှေးလိုက်၏။ ထမင်း အိုးကလေးကိုဖွင့်ကြည့်ပြန်တော့ ထမင်းမရှိတော့။ထမင်းအိုးကလေးကို သေချာ ဆေးပြီးနောက် ဆန်နို့ ဆီဗူး တစ်လုံး ထည့် ဆေးကာ တည်လိုက်၏။
အိမ်ရှေ့ ခန်းပြန်လာပြီး ကွန်ပြူတာကို ဖွင့် အင်တာနက်စာမျက်နှာများ အား ဖတ်ဖြစ်တော့...
NCUB က အစိုးရသစ်ထူထောင်တော့မည်ဟု နှစ်သစ်ကူးအထူးထုတ်ပြန်ချက် တွင်ဖတ်လိုက်ရ၏။
ထို့ ပြင် သမိုင်းဆရာမ လိုလို ဘာလိုလို အမျိုးသမီးတယောက်သည် ဓါတ်ဆီ ဈေးကြီးမြင့်ရသည့်ကြားထဲတွင် သူမ အကယ်ဒမီဖြစ်ရေးအတွက် နီးစပ်ရာ မြို့ များ၏ စာကြည့်တိုက်များမိတ်ဆွေများ၏အိမ်များသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကာ သူမ ကိုယ်သူမ မဲပေးနေသည်ကိုလည်းနတ်မျက်စိဖြင့်အိပ်မက် မက်မိပြန်လေသတည်း ။ အော် မိမိငဲ့ ......လွယ်နေတာကိုခက်အောင်လုပ်သည်
ကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးတွင် proxy server တွေပေါမှပေါ ။ကိုယ့်အိမ်က ထိုင်နေရင်း ကိုယ့်ဟာကိုယ် မဲ ပေါင်း
ထောင်ချီပေးလို့ ဖြစ်ရက်နဲ့ လကွယ်ဟု ငြီးငြူ မိပြန်၏။
ဒါက တော့ ကိုမောင်မောင်မြင့်တို့ အားရှိစရာပေါ့ ။
ဒီကြားထဲ အရိပ်သုံးပါး ကို ဘယ်သောအခါမှ နားမလည် သည့် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကလည်းသူတို့၏ စာမျက်နှာများတွင် အလကားမတ်တင်းကြေငြာကာ အကယ်ဒမီိစိတ်ကူးယဉ်ကြပြန်ရင်း တောင်ရှည်ပုဆိုးများ ခေါင်းပေါင်းများ အမှီဝယ်ရန်ကြံစည်နေကြပြန်၏။
စိတ်ထဲမှာ ဘီအမ်အေ ဥက္ကဌကြီး ဦး မောင်မောင်မြင့်တို့ အကြိုက် ကြိုတင်ဆင်ဆာ ဖြတ်ကာ တွေးလိုက်မိသည်က ”NCGUB က ဂီလာနတွေက ဘယ်နားသွား အနိစ္စရောက်နေလို့လူကြီးမင်းတို့ က
ဒီလို ဖွဲ့ ရတာတုန်း ...............“
ဟုတ်သားပဲ ခုလိုဆိုတော့လဲ နားဝင်ချိုသား NCGUB က သေခါနီးတွေက
ဘယ်သချိုင်းသွားသေနေလို့ဒင်းတို့ က ဒီလို ဖွဲ့ရတာတုန်းလို့ တွေးလိုက်ရင် ....
ဒါ ကြမ်းတမ်း နားဝင်မချိုသော စကား ဖြစ်သွားပေလိမ့်မည် ။စာပေ ဒေါသသင့်သွားပေလိမ့်မည်။
ဟုတ်ပေသကိုး ပျားသကာသို့ ချိုလှစေအပြင် တုတ်ကြီးဟု ရာဇ၀င်နှင့်အမည်တွင်သည့် ကျွန်ုပ်သည်
မိမိစိတ်ကိုမိမိ အတိအကျ ဆုံးမကာ ဆေးသကြားပါအုပ်လိုက်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်၏။
ထို ကြေငြာချက် ကိုသေချာ အနုလုံပဋိလုံဖတ်ရင်း NCUB မှ ဦးဆောင်သည့် Credential Challange ဆိုသည့်ကိစ္စကို သွားသတိရ၏။UN မှ Credential Challange ကို အစိုးရတစ်ရပ်မှ ပြုလုပ်လျှင်သာ အကြုံးဝင်သည် ဆိုသော သဘောရှိသည့် တုန့် ပြန် အကြောင်းကြားချက်ကို ကြားလိုက်မိဖူး၏။ အကယ်၍ အဲသည်ကာလက Credential Challange ကို အမေရိကား နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန် မြို့တော်နေ အဝေးရောက်အစိုးရမင်းများ အနေဖြင့်သာ ကိုင်တွယ်လိုက်မည်ဆိုလျှင် အဖြေမည်ကဲ့သို့ထွက်မည်နည်း။
သို့သော် အဝေးရောက် အစိုးရမင်းများ မှ သီရိပျံချီ အဂ္ဂမဟာ အာပလာ ကျော်စွာ ဦးစိန်ဝင်း တို့ ဦးဘိုလှတင့်တို့ က ခင်ပွန်းလည်းရချင် သံဝါသ အပြုခံရမည်ကိုလည်း
ကြောက်သော ယင်ဖို မသမ်းဖူးသည့် အပျိုကြီး မူနေသည့် အချိုးဖြင့် အချိုသပ်ကာ မချင့်မရဲလက်ရှောင်ခဲ့ကြ၏။
NCUB က ယခုလို အစိုးရတစ်ရပ် အဖြစ်ဦးတည် သည့် ကြေငြာချက်အတွက် NCGUB အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ စဉ်းစားထားသနည်း။
နအဖ စစ်အာဏာရှင်အဘယ်ကဲ့သို့ တုန့် ပြန်မည်ကို အသာခနထားလို့ ယခု ဒီဖက်ခြမ်းမှ အတိုက်အခံများ အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်ကြက်ဖ ဗိုလ်ကြက်ဖ ခွပ်ပွဲ ကို စတင်လိုက်သလိုများဖြစ်မနေဘူးလား။
NCUB မှာတော့ လက်နက်ကိုင်အင်အား ရှိသည်။ တပ်ရှိသည် ဟု သတ်မှတ်လို့ ဖြစ်သည်။ NCGUB တုန်းကတော့ ရှိသမျှ လက်နက်ကိုင်အင်အားစုများက အားကိုးတကြီး အရေးပေးချည်းကပ်စဉ်ကာလက
အာပလာကျော်စွာ ဘွဲ့ ရအမတ်မင်းတို့ က “အိုင်တို့ က အကြမ်းမဖက် ရေး လေ အိုင်တို့ က အိုင်တို့ က“ ဖြင့် အိုင်တွေ့ တိုင်းခြေဆေးရင်း ခြေအေးဝမ်းရောင်တွေဖြစ်ကုန်တော့၏။
အလုပ်မဖြစ် အနှစ်နှစ်ဆယ် ရှေ့ လည်းမသွား ဘေးလဲမထွက် နောက်လဲ မဆုတ် ခက်တာက ရှေ့ က ပိတ် နေယုံမကအသားကုန်ကလည်းဘုန်းပေးတော်မူရင်း
ဒီတော့ကာ နောက်ကလူတွေမဆိုထားနှင့် ၀န်းကျင်တခွင်ပါ နံတော်မူ၏။ ညွန့်ပေါင်း အစိုးရ စဖွဲ့ သည့်နေ့က မွေးသည့်ကလေးပင်လူလားမြောက်ပြီး လူလူသူသူ ဖြစ်နေပေပြီ။ ကျွန်ုပ်တို့ ၏ အစိုးရမင်းများစည်းရုံးရေး ကောင်းမှု ဦးဆောင်မှု ပြောင်မြောက်မှုကရှိသည့် ၀န်ကြီးများပင် ပဲ့ထွက်ကုန်ကာ အသီးသီးအသက အသက ဆိုင်ရာပိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာလေးများဖြင့် စားကောင်းသောက်ကောင်းယုံ ရပ်တည်နေကြ၏။
သို့ သော် တဖက်တွင် တကယ်တန်း စိတ်ဓါတ်ရှိပြီးလုပ်ချင်ကိုင်ချင်သော အမတ် များမြောက်များစွာရှိသေး၏။ ထိုအနေအထားတွင် NCUB ၏ ကြေငြာချက်သည် လိုအပ်ချက်အရဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်၏။ သို့သော် ထိုလိုအပ်ချက်က ဘယ်အင်အားစု၏
ထို့ ပြင်တ၀ တလျှောက်လုံး မဆလ ပါတီ ၏ တက်ကြွသောပါတီဝင်တယောက်က ၁၉၉၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အမတ်တက်ဖြစ်ကာ ခေါင်ရေမူးရင်း အော်ကြီးဟစ်ကျယ်ထရမ်းပြန်၏။
အော်ဒုက္ခ .. ဒုက္ခ...။
အားလုံးထဲ လူနပ်ချမ်းသာ အမတ်မင်း ဦးဇီဝက တယောက်ကတော့ ကလောင်သွေးကာ အနောက်ဖက် ချောင် ကလေးက ထထ အော်နေသည်ကတော့ “သား..သား... ပါဘူး ..သား..သား ပါဘူး ” ဟူသတတ်။
ထိုအချိန်တွင် တရုတ်နှစ်သစ်ကူးကလည်းနီးလာပြီဖြစ်သဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အာရှ တခွင်တွင် အကုန်လုံး နွား စိတ်တခုတည်းဖြင့် နှစ်သစ်ကို ကြိုဆိုရန်ပြင်ဆင်နေကြ၏။
ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ခေါင်းဆောင်ကြီး ဘကြီး ဦးသန်းရွှေတို့ ကလည်း ဒီကိစ္စမျိုးတွင်တော့ အားကျမခံပေ။
တရက်တွင် တရုတ်မှ အဆင့်မြင့်အရာရှိတဦး နေပြည်တော်သို့လာရောက်ကာ ဘကြီးဦးသန်းရွှေအကြိုက် တရုတ်နိုင်ငံလုပ် ဘိလိယက်ခုံတစ်ခုံ နှင့် ထိုးတံ တစ်ဒါဇင်လာပို့ ရင်း
ဘကြီးဦးသန်းရွှေနှင့်စကားလက်ဆုံကျကြ၏။ တရုတ် အရာရှိက ဘကြီးဦးသန်းရွှေ အား တရုတ်နှစ်သစ်ကူး တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ဘကြီးဦးသန်းရွှေအနေနှင့် အန်ပေါင်းပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း
ယခု နှစ်သည် နွားနှစ်သို့ ကျရောက်ပြီဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံ ၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ၊ တိုင်ဝမ်နိုင်ငံ နှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင် နွားရုပ်များ နွား ပိုစတာများ နေရာအနှံ့ကပ်ကာ နွား နှစ်ကို ကြိုဆို မှုအတွက်ပြင်ဆင်နေကြကြောင်း ပြောလေတော့၏။
ဘကြီးဦးသန်းရွှေက မျက်ခုံးကိုပင့်ကာ ဘိလိယက်ထိုးတံထိပ်ကို လေးထောင့်မြေဖြူခဲဖြင့် ပွတ်ရင်း ပြန်ဖြေလိုက်၏။ “ မပူပါနဲ့ ... ကျုပ်တို့ ကလည်း နွားနှစ်မှာ အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ် အဲဒီနိုင်ငံအားလုံးထက်ကိုသာစေရမယ် ဗျာ ..သူတို့က ပိုစတာတွေနဲ့
အရုပ်တွေနဲ့ပဲလုပ်တာမဟုတ်လား ကျုပ်တို့ မြန်မာက နွားနှစ်မှာ နွားဖြစ်အောင်ကို ပြင်ဆင်ထားပြီးသား ဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြန်ပြောလိုက်ပါ ” ဟု ပြန်ဖြေလိုက်တော့သတည်း။
ထို့နောက် ဘကြီးဦးသန်းရွှေ ၏ အနားပြာတို့သည် တဆင့် စကားတဆင့်နားဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး၏ အမိန့် ကို အမြန်ဆုံး နာရီပိုင်းအတွင်းအကောင်အထည်ဖော်ရန် အတွက် လမ်းညွှန်ချက်အသီးသီးပေးလိုက်ပြီး တညီတညွတ်ထဲ ၀န်ကြီးဌာနနှင့်တပ်မတော်အင်အားစုအားလုံးသို့
ယခုနှစ်သည် တရုတ် လူမျိုးတို့ ရိုးရာအစဉ်အလာရ နွားနှစ်သို့ကျရောက်ပြီဖြစ်ပေသည်။
ထို့ကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ၏ ဥပဒေထက်အာဏာတည်သော အမိန့် အရ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရဌာနအသီးသီး တပ်မတော်၏ တပ်ရင်းတပ်ခွဲအသီးသီးနှင့် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး အား ယခုကဲ့သို့ အမိန့် ချမှတ်လိုက်သည်။
၁။ မည်သည့် တယ်လီဖုန်း မြည်သံကို မဆို ပြန်လည်ဖြေကြားရာတွင် ဟယ်လို ဟု ထူးမည့်အစား ဘွတ်အဲ ဟုထူးရမည်။
၂။ မည်သည့် တပ်တွင် မဆို မနက်ပိုင်း လမ်းလျှောက်ရာတွင် ဘယ်ညာ ဘယ် ညာ ဟု အော်မည့်အစား ဘွတ်အဲ .. ဘွတ်အဲ ဟုအော်ရမည်။
၃။ မည်သည့် နှုတ်ဆက် စကားပြောဆိုမှုတွင် မဆို မင်္ဂလာပါ ခင်ဗျာ ဟု နှုတ်ဆက် မည့်အစား ဘွတ် အဲ.........ဟုအမျိုးသားများက နှုတ်ဆက်ရမည်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသမီးများအနေဖြင့် .. ဘွတ်...အွတ်အွတ်..အဲ..ဟဲ့......ဟု နှုတ်ဆက်ရမည်။
ထိုအမိန့် ထွက်ပြီးနောက် ဘကြီးဦးသန်းရွှေသည် သူ၏ အိမ်တော်တွင် ထိပ်တန်းလျှို့ ဝှက်အစီအစဉ်ဖြင့် မည်သူမှ သိခွင့်မရှိအောင် တည်ဆောက်ထားသည့် လျှို့ ဝှက်အခန်းတစ်ခုကို ကုတင်ပေါ်မှ ရီမုကွန်ထရိုးဖြင့် ဖွင့်လိုက်ရာ အိပ်ခန်းနံရံကြီး သည် တကျွီ ကျွီ မြည်လျှက် ကောက်ရိုးများ နွားစာခွက်အရှည်များဖြင့် နွားတင်းကုတ်ကြီး တခုဘွားကနဲ ပေါ်လာ ကာ ဘကြီးဦးသန်းရွှေသည်ပြုံးပြုံးကြီးဖြင့် လေးဘက်ထောက်၍ “ အင်း ခုမှပဲ...........” ဟု ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး မြည်တန်းဟစ်ကျွေးပြီးနောက်တလှမ်းချင်းဝင်သွားပါတော့သတည်း။
ထို့ အတူ ဂျီမပါသော NCUB နှင့် NCGUB ခေါင်းဆောင်များသည် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မှန်းမသိ။ အားလုံးလိုလို ဦးထုတ်ကလေးများစောင်းကာ သူတို့ ၏ ချိုဇောင်းနေရာများသို့ခဏခဏ မသိမသာ စမ်းစမ်းကြည့်ရင်း မြက်ခင်း ၊ ကောက်ရိုးပုံတို့ နှင့် ဝေးနိုင်သမျှဝေးရန် စိတ်အားကိုတင်းလျှက် ကြိုးစား နေကြပေတော့သတည်း။ထိုအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တုတ်ကြီးသည် အားလုံးကို လှောင်ကာ နှမ်းဖတ်ချဉ်ကို ရှောက်ရွက်ဖြင့်သုတ်၍ ထန်းရည် တစ်မြူ နှင့် ကောက်ရိုးပုံဘေးတွင်ဇိမ်ကျနေပါတော့၏ မကြာခင်ပင် အူမြူးချိုကြွမှုများအားမည်သို့မည်ပုံကျွန်ုပ်တို့မြင်ကြရမည်ကိုကား
ထိုအချိန်တွင် ခေတ်မှီ ကွန်ပြူတာများဖြင့် ထိမ်းချုပ်မောင်းနှင်သော နွား နှင့် လည်ပတ်သည့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးစက် စီမံကိန်းမှ နွားများသည်လည်း “အင်း....ခုမှပဲ ” ဟု သက်ပြင်းချကာ online တက်ရန်အားခဲကြပါတော့၏ ။ ကြက်ဆူပင်စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းကိုလည်း အကန့် အသတ်မဲ့ရပ်ဆိုင်းကာ တတိုင်းပြည်လုံး မြက် စိုက်ရန် အတွက် တာဆူနေကြပါလေတော့သတည်း။
Posted by Nyein Zay Oo at 12:18 PM0comments
ထမီအုပ်၍ လွှတ်လိုက်သည် (တကိုယ်တော် ပြောဇာတ် နားဆင်န...